ပဲ့တင်သံတခုရဲ့ ရောင်ပြန်: ရောင်ပြန်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲ
Posted by ရောင်ပြန် at 3:08 PM
ံပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ.း)
ရောင်ပြန် ... နင်ကမွေးနေ့မှာ ငါတို့ကိုတောင် မဖိတ်ဘူး နော်...။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြောစရာလူတွေ မဟုတ်တော့ လာရတာပေါ့ဗျာ...။ မွေးနေ့ပါပျော်ရွှင်ပါစေ။ စာတွေလည်း အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။ ဘ၀တက်လမ်းတွေမှာ အခက်အခဲမရှိပဲ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်မကောင်းလို့.. ဘယ်မှ မသွားရဘူး..
မွေးနေ့ကို ကြွရောက် ချီးမြှင့် စားသောက် သွားပါတယ်ရှင်။
Happy Birthday ညီမလေးရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ပျော်စရာအကောင်းဆုံး မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ဒီနှစ်မှစပြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ... မရောင်ရေ..
ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတိုင်း ပြည့်ဝပါစေ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ပေါင်း မြောက်များစွာ ထာဝရ ရရှိပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ ... ရောင်ပြန်ရေ ...
လိုအင်နဲ့ဆန္ဒ ထပ်တူကြလို့ ဘ၀လမ်းထက် မြဲရွှင်ထက်အောင် ပဲ့တင်သံတိုင်းမှာ အမြဲကြည်လင် လန်းနိုင်ပါစေ။
သိတော့မသိဘူးဗျာ..။ အခုမှရောက်ဖူးတာ..ဒါပေမယ့် ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ မွေးနေ့ နဲ့ တိုးလို့ကံကောင်းတာပေ့ါ...။
Happy birthday! ဗျာ
ယနေ့ မှစ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..။
Many Happy Return of the Day ပါ မရောင်ပြန် ရေ..
နောင်နှစ်ပေါင်းများစ္ဂာ ပျော်စရာ မ္ဂေးနေ့ပ္ဂဲ များကို ကျန်းမာ ရွှင်လန်းစ္ဂာ ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
မကြီးရေ ပစ်ထားကျတယ် အဟင့် အဟင့်
ဖြစ်တာကဖြစ်တာပဲ အားလုံးကို ပစ်ထားစရာလားလို့ 
မွေးနေ့မှ စပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ.....
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ပွဲလေးဖြစ်ပါစေ
I am sorry for my lateness.
May you get thealot of great luck because of your good effort!
မွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ် ပေါင်းများစွာ အထိ
ငြိမ်းချမ်း အေး မျှသော ဘ၀ တစ် ခု ဖြစ် ပါစေ ဗျာ
မွေးနေ့လာတာ နောက်ကျသွားတယ်.. စားစရာတွေတောင် ကုန်ပြီ... မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ... ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ပါစေဗျာ.. :P
ပျော်ရွှင်စရာ ဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
happy birthday.. မရောင်..
ဘဝ တလျှောက် လုံး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ပါစေ
ဟာ မသိဘူးဗျ ..လက်ဆောင်လည်း မပါခဲ့ဘူး။
ဆုတောင်းပေးပြီး ဝင်စားလိုက်တော့မယ် ...
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။ဘလောက် မှာလည်း ပို့စ်တွေ အများကြီးတင်နိုင်ပါစေဗျာ။
အာာာာာာာာမွေးနေ့ရှိမှန်းမသိဘူး... အခုမှ တွေ့တယ်..
၀ါးတီးတွေတော့ ကုန်ပါပီ... ဟင့်..
နောက်ကျသွားလို့ ဆောရီးပါ နော်...
ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါစေ နော်...ဆုပဲတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်....
Happy Belated Birthday.... ပါ ရောင်ပြန်လေးရေ...
ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး. ရောင်ပြန်လို့ ပြောတိုင်း ရန်ပြောင်လို့ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ခေါ်တတ်တဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကို သွားမြင်မိတယ်.
ကျွန်တော်တို့တွေ မောင်နှမလုပ်လို့ရတယ်ထင်တယ်. ဟတ်ဟတ်.
ရန်ပြောင် (အဲလေ..) ရန်အောင်.
ပျော်ရွှင်ဘွယ် မွေးနေ့တွေ အများကြီးတွက် ဆုတောင်းပေးပါတယ် ရောင်ရေ..
မွေးနေ့ဆုတောင်းလွှာ နောက်ကျတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါနော..ူမန်မာူပည်က စာတိုက်တွေ အေုကာင်းသိတယ်မဟုတ်လား .. စတာနော်..
မွေးနေ့မှစလို့ နောင်နစ် ၁၂၀ တိုင် ချစ်ရသောသူများနှင့် ပျော်ရွင်စရာဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
တို့ နောက်အကျဆုံး ဖြစ်သွားပါတယ် ရောင်ပြန်ရေ၊ စာတွေ အများကြီးရေးပီး ဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်စုံပါစေ
ညီမလေးမွေးနေ့ နောက်ကျသွားတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော်၊၊